विवाहको अन्तिम तयारीमा कैटरिना–विक्की, कहिले कस्छन् लगनगाँठो ?
बलिउड अभिनेत्री कैटरिना कैफ र विक्की कौशलको विवाह अहिले बहुप्रतीक्षित नै बनेको छ ।
केही समयअघि देखि उनीहरूको विवाहको चर्चा चलिरहेको छ ।
उनीहरूले धमाधम बिहेको तयारी गरिरहेको पनि चर्चा चलिरहेको छ ।
उनीहरूको विवाहको मिति अब भने सार्वजनिक भएको छ ।
उनीहरूले ९ डिसेम्बरमा राजस्थानको सवाई माधोपुरस्थित एक रिसोर्ट सिक्स सेन्स फोर्ट बरवारामा विवाह गर्ने तयारी गरेका छन् ।
दुर्गा प्रसाईं- एमाले महाधिवेशनका सेलिब्रेटी, सेल्फी खिच्न तँछाडमछाड !
दीपिका पादुकोणले के लुगा लगाएको यस्तो ? (भिडियो)
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण नयाँ फिल्म गहराइयांको प्रमोसनमा व्यस्त छिन् । प्रमोसनका क्रममा दीपिका सुन्तला रंगको बोल्ड कपडामा देखिइन् । तर प्रशंसकहरूलाई दीपिकाको यो कपडा मन परेन । प्रमोसन गर्...